Fantaro ireo lehilahy afa-nidify ireo polisy miafin’ny volombava ao Tajikistan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Septambra 2015 4:40 GMT
Sary Flickr avy amin'ny mpisera Joebeone.
Nanodidina ny taonjato faha-18 tany ho any ilay goavana indrindra tamin'ny fampidirana an'i Rosia ho amin'ny fanao maoderina, i Piera Lehibe no nampiditra ny hetra hafahafa indrindra teo amin'ny tantara: ny hetran'ny volombava. Mihoatra ny taonjato telo taty aoriana dia miatrika amin-kafanampo tafahoatra mitovy amin'izany ihany koa ny filohan'i Tajikistan farany, Emomali Rakhmon.
Nahazo aingam-panahy tamin'ny kolontsaina tia miharatra volombava tany Eoropa Andrefana ny Tsar Piera no nitady ny hanaovan'i Rosia tahaka izany ihany koa:
Taorian'ny fiverenan'i Piera miezinezina tao Rosia taorian'ny dia nanavatsava an'i Eoropa tamin'ny taona 1698, dia nisy ny lanonam-pifaliana nomanina ho fanomezam-boninahitra azy. Anisan'ny nanatrika ny komandin'ny tadika sy ny lefitry ny komandy, Fyodor Romodanovsky, ary ireo vahiny miaraka amin'ny tandapa sy diplaomaty.Tampoka teo dia nivadika ho horohoro ny alahamohamom-bahoaka nanatrika teo rehefa namoaka hareza mavesatra fiharatam-bolombava iray tampoka i Piera. Araka ny nosoratan'i Robert K. Massie, mpanoratra tantaram-piainan'olona, “Rehefa nitety tamin'ireo namany sy nifamihina tamin'izy ireo izy… dia nanaratra ny volombavan-dry zareo” tamin'ny tanany mihitsy! Noho ny sata ara-politika nananany dia tsy nisy ny nahasahy nanda na nanontany amin'izao fivadihan'ny lanonana izao. (Tsy marofy ihany koa ny fijorony: mandonda i Piera)
Naharomotra tokoa tany amin'ny Tontolo Tadrefana ny hananana tenda sy tarehy tsy misy volo, ka dia nampidirin'ny Tsar fa (ankoatra ny mpitondra fivavahana sy ny tantsaha) tsy maintsy manary ny saritaka rehetra eo amin'ny tavany ny olony. Nafana fo tamin'ny heviny tokoa i Piera hany ka nanome baiko ny manampahefana ao amin'y polisy aza izy hanaratra avy hatrany ireo mandà tsy hanao izany.
Raha tsipahin'ny Minisiteran'ny Atitany ao Tajikistan ny fisian'ny baiko tahaka izany ao amin'ity firenena aziatika afovoany ity, dia maro ny tatitra fa aratan'ny polisy an-terisetra ireo lehilahy feno volo ny tavany.
Raha nataon'i Piera lasibatra izay heveriny fa fihemorana eo amin'ny volombva raikitapisaka rosiana, dia hita ho lasibatra ao Tajikistan kosa ny fitomboan'ny fanintonan'ny Islamo ao amin'ny fiarahamonina ao an-toerana.
Nenjehin'ny filoha Rakhmon, 62 taona, izay lehiben'ny toeram-piompiana sy fambolena iraisana talohan'ny niakarany teo amin'ny fahefana, fatratra ny fivavahana sy izay rehetra misy ifandraisana amin'izany.
ankoatra ny fandrarana mipetraka ho azy amin'ny fanaovam-bolombava, dia hita amin'ity taona ity ny famerana fanafarana hijab sy ny fitarihana hamafa tanteraka ny anarana arabo sy vahiny hafa eo amin'ny fiainana andavanandro.
Eny mmahamenatra fa mbola misy ihany ny lehilahy no mivezivezy eny an-ddalambe Tajik amin'ny endrika vinitra.
Asia Plus, iray amin'ireo seha-baovao mahaleotena vitsy dia vitsy ao Tajikistan no nitafatafa tamin'ny vitsy amin'izy ireny:
Dzhavod Rabzhadov, DJ ao Dushanbe DJ. Sary nampindramin'i Asia Plus.
Dzhavod Rabzhadov, DJ ao Dushanbe: Ankavitsiana no anakanan'ny polisy ahy, fa rehefa manakana ahy ry zareo dia matetika noho ny fijery ahy amin'ny ankapobeny: kavina, volo lava, ny fomba fiakanjoko. Samy manana ny fihetsiny ny olona rehefa eny an-dalambe: misy ny tia,misy ny tsy tia. Miezaka aho no mikarakara ny volombavako, sy manao azy hanana endrika mahafinaritra. Fa izany eo ihany, efa ela no nanaovako volombava, ka finaritra aho mahita ahy eo amin'ny fitaratra.
Romish Ibrohimov. Sary nampindramin'i Asia Plus.
Tsy nampaniry vlombava noho ny antony ara-pivavahana na noho ny antony te-hitovy amin'ny sarambambem-bahoaka aho, fa noho izy mahafinaritra, ary tiako ny lokony manopy mena.
Eny an-dalamben'i Dushanbe dia matetika no namintona ny olon-tsotra ny volombavako: mieritreritra ny rehetra fa mila mihira ny andalana iray avy amin'ilay hira [Rosiana]: “Manambolombava ianao, ary hiteny aminao aho — eka.”
Na izany aza, misy ireo fihetsika tsy tsara sasantsasany. Hitako fa mahatezitra fatratra ny namako mpandala fombam-pivavahana ny volombavako, noho ny antony tokana fa tsy mpanaraka fivavahana aho. Mino ry zareo fa tsy mananjò ny hanao volombava aho, ary izany no tsy rariny. Manao volombava aho, fa ry zareo tsy manana, fa na voararan'ny any amin'ny toeram-piasany na tsy afa-mampaniry ry zareo. Mamela ahy ho amin'izany ny asako, sy ny testosterone-ko.
Mikhail Petrushkov. Sary nampindramin'ny Asia Plus.
Mikhail Petrushkov, solontenan'ny firenena aziatika afovoany ao amin'ny Vaomieram-Pandrindrana Manerantany eo amin'ny Mpiray tanindrazana Rosiana: efa nihoatra ny 20 taona no nanaovako volombava. Tsy nisy olona mihitsy tamin'izany ary maninona no tokony ho eo io? Tiako ny volombava — izany no nampaniriako azy. Mety tsara ny fihetsiky ny mpandalo.